Habka ugu fudud ee loo samayn karo Cunnooyinka Wheels Maalinta Jacaylka ee macmiilka - Meals on Wheels
Hab fudud oo loo sameeyo Cunto ku saabsan Maalinta Jacaylka ee macmiilka Macaamiisha
Ma waxaad raadineysaa mashruuc iskaa wax u qabso ah oo fudud, xiise leh oo saaxiibtinimo leh oo leh awood uu ku sameeyo maalinta waayeelka deegaanka maalinta Jacaylka? Waxaan soo saareynaa baaq madadaalo, kaararka Maalinta Jacaylka shaqsiyeed oo loo geyn karo macaamiisheenna iyada oo ay la socdaan cunnadooda Febraayo 14.
Sameynta kaararka Maalinta Jacaylka waxaa lagu sameyn karaa guriga, mashruuc mashruuc ahaan ama xitaa mashruuc iskaa wax u qabso la xiriira. Waa fursad weyn carruurta iyo dadka waaweyn si isku mid ah inay u adeegsadaan hal-abuurnimadoodu farxad u keento macaamiisha Cunnada Dufanka. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad sameysaa kaararka, oo aad dirtaa ama aad gaysaa ugu dambeyn Talaadada, Febraayo 11, xafiiska metals on Wheels ee 1200 Washington Ave. S., Suite 380, Minneapolis, MN 55415.
Macaamiisha qaarkood, Tabaruce gaarsiinta Meals on Wheels waa qofka kaliya ee ay arki doonaan maalinta oo dhan, sidaa darteed helitaanka wax yar oo dheeri ah waxay aadeysaa wado dheer. Haddii sameynta kaararka Maalinta Jacaylka u egtahay mashruuc adiga kuu ah, halkan waxaa ku yaal dhowr tilmaam:
U qor fariin farxad leh macmiilka Meals on Wheels. Ku dar xariifnimo, Maalinta la xiriirta Jacaylka ee ereyada, ama si fudud salaan wanaagsan, oo qalbi furan.
Ciyaar si qurxan u qurxiso kaarka hadba dariiqa aad u aragto inuu ku habboon yahay. Isticmaal midabyo dhalaalaya oo baashaal!
Haddii aad runtii rabto inaad gasho, waxaad ku dari kartaa wax yar, Maalinta Jacaylka la xidhiidha, sida calaamado ama qurxin.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, xor ayaad u tahay inaad naga soo wacdo 612-623-3363 ama emayl noo soo dir [email protected].
Ka eeg muuqaalka KARE 11 mashruucan:
Qaxwaha leh KARE - Cuntooyinka lagu ciyaaro Wheels ka Jessica Petron on Vimeo.